ဘယ်လို အချိန်မျိုးတွေမှာ ဆံပင်တို ညှပ်သင့်လဲ? -
Posted on December 24, 2018 December 24, 2018 Author Hnin Ei Oo	Comment(0)
နှင်းကတော့ ဆိုင်သွားတိုင်း ညှပ်ရင်း ညှပ်ရင်းနဲ့ ပြန်ကို မရှည်တော့ဘူးရယ် 😛
ငါဆံပင်ညှပ်တော့မယ်နှင့် ခေါင်းလျှော်ပြီး ပြန်ပြန်လာခဲ့သော နေ့ရက်များ၊ အတိုလေးညှပ်ချင်တယ်နှင့် ထပ်ထပ်ရှည်လာသော အမွေးပေါင်းချုပ် စသည်ဖြင့် အိပ်ရာဝင်ပုံပြင်တွေ ပြောပြောနေတာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာခဲ့ပြီနော်။ အခုထိ အကောင်အထည်ဖော်ဖြစ်ဖို့ နေနေသာသာ ဆိုင်ထဲဝင်ရင် ညှပ်မိမှာစိုးလို့ဆိုပြီး အဝေးကနေရှောင်ကွင်း ထွက်ပြေးနေတာမလား။ ဒါပေမဲ့ တကယ်တမ်းကျတော့ ဆံပင်ဆိုတဲ့ အမျိုးက ရှည်တိုင်းမကောင်းသလို ညှပ်သင့်တဲ့အချိန်ဆိုတာလည်း ရှိပါတယ်။ ကိုယ့်ဆံပင်တွေကို ဘယ်အချိန်မှာ တိုတို ညှပ်သင့်လဲဆိုတော့….
မှန်ထဲကြည့်တဲ့အချိန် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လှတယ်လို့ မမြင်တော့ရင်။
ဒါကတော့ ရှင်းပါတယ်နော်။ လူဆိုတဲ့ အမျိုးက ကိုယ်သိပ်ကြည့်မကောင်းနေရင်တောင် တခြားလှတဲ့နေရာလေးတွေကို ဖြည့်ကြည့်ရင်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အလှပဂေးဆိုပြီး ဂုဏ်ဆာနေတတ်တာမလား။ (မလှဘူးမြင်ရင်လည်း ခဏပါပဲ။) ဒါပေမဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ မှန်ကြည့်တိုင်း ‘ငါ့ဆံပင်ကြီးက ဘုတ်သိုက်နဲ့ အဆင်မပြေလိုက်တာ’ ဆိုတဲ့ စိတ်မျိုး ခဏခဏဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ ဆံပင်ညှပ်ချိန်တန်ပါပြီ။
ကိုယ့်ဆံပင်လေးက ရှည်တော့ရှည်ပါရဲ့ အနားတွေကဖွာပြီး ပြောင်းဖူးမွေးဖြစ်၊ ဆံပင်ဖြီးရင်လည်း ဂျပ်ခဲကြီး ဖြစ်ဖြစ်နေတော့ ဘယ်လိုမှ အရှည်ဆက်ထားဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလေ။ အဲ့တော့ ခုလောလောဆယ်အရှည်ထားလည်း ကြည့်ရတာမတင့်တယ်မယ့်အတူတူ ညှပ်လိုက်ပြီး ဆံပင်ကောင်းကောင်းလေး ပြန်မွေးတာကမှ အများကြီးပိုအဆင်ပြေသွားမှာမို့ ဒီလိုပျက်စီးနေတယ်ဆိုရင်လည်း ညှပ်လိုက်ပါ။
ဥပမာ အသည်းကွဲတဲ့ အခြေအနေမျိုး၊ စာမေးပွဲကျသွားတဲ့ အခြေအနေမျိုးပေါ့ ယောင်းရယ်။ ကိုယ်က အရာရာကို အရှုံးပေးချင်နေပြီး စိတ်ဓာတ်လုံးလုံးကျနေတဲ့ ဒီလို အခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင် အသစ်အဆန်း တစ်ခုခုဘက်ကို ကိုယ့်အာရုံ လွှဲပစ်လိုက်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ အနီးစပ်ဆုံးကတော့ ဒီဆံပင်ပေါ့။ ကာလာတွေဆိုးပြီး ကိုယ်အရင်တုန်းကလုံးဝမညှပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ပုံစံမျိုးသာ ညှပ်ချလိုက်ယောင်းရာ။ လွင့်ချက်တစ်ပေါက် လျှမ်းလျှမ်းတောက်ပြီး စိတ်လည်းပေါ့ပါးသွားစေရမယ်။
ဆံပင်ကိုလေ ညှပ်ချင်နေရင် ညှပ်သာချလိုက်။ တခြား ဘာမှထွေထွေထူးထူး တွေးတောမနေနဲ့။ ရည်းစားက ခွင့်မပြုလို့၊ အဖေအမေ ဆူမှာဆိုးလို့ စသည်ဖြင့် အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ကိုယ့်ဆန္ဒကိုထိန်းချုပ်ထားရတာမျိုး မလုပ်နဲ့။ လောကမှာ တခြားလူကြောင့် ကိုယ့်စိတ်ကိုယ် ချုပ်တည်းနေရတာလောက် စိတ်ပျက်စရာကောင်းတာ မရှိဘူး။ ကိုယ်ညှပ်ချင်စိတ်ပေါ်လာရင် ညှပ်ချလိုက်၊ အရှည်ထားချင်ရင် ဆက်ထားလိုက်။ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်၊ ကိုယ့်ပုံစံအတိုင်း နေပါ။ စိတ်ထဲအများကြီး ပေါ့ပါးသွားပါလိမ့်မယ်။
ဆံပင်ဆိုတာ ကိုယ်မသေမချင်း ပြန်ပြန်ရှည်တတ်တဲ့ အမျိုးအစားပါနော် :3 ။ အကယ်၍ ကိုယ်ကရုတ်တရက်ကြီး ညှပ်ချလိုက်လို့ ကိုယ့်မျက်နှာအနေအထား၊ ပုံစံနဲ့ မလိုက်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်မျက်နှာနဲ့ လိုက်မယ့်ပုံစံကို သေချာအရင်ရွေးသွား၊ ပညာရှင်တွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးမှ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ပုံစံကို သေချာပုံသွင်းညှပ်ပါ။ ဖြစ်နိုင်ရင် နှင်းကတော့ ငယ်တုန်းရွယ်တုန်းလေး အသစ်အဆန်းမှန်သမျှကိုလိုက် စမ်းကြည့်စေချင်တယ်။ အကယ်၍ ယုတ်စွအဆုံး ကိုယ်နဲ့ သိပ်မလိုက်ခဲ့ရင်လည်း စိတ်ကျေနပ်မှုရစေပါလိမ့်မယ်လို့။
နှငျးကတော့ ဆိုငျသှားတိုငျး ညှပျရငျး ညှပျရငျးနဲ့ ပွနျကို မရှညျတော့ဘူးရယျ 😛
ငါဆံပငျညှပျတော့မယျနှငျ့ ခေါငျးလြှျောပွီး ပွနျပွနျလာခဲ့သော နရေ့ကျမြား၊ အတိုလေးညှပျခငျြတယျနှငျ့ ထပျထပျရှညျလာသော အမှေးပေါငျးခြုပျ စသညျဖွငျ့ အိပျရာဝငျပုံပွငျတှေ ပွောပွောနတော နှဈပေါငျးမြားစှာ ကွာခဲ့ပွီနျော။ အခုထိ အကောငျအထညျဖျောဖွဈဖို့ နနေသောသာ ဆိုငျထဲဝငျရငျ ညှပျမိမှာစိုးလို့ဆိုပွီး အဝေးကနရှေောငျကှငျး ထှကျပွေးနတောမလား။ ဒါပမေဲ့ တကယျတမျးကတြော့ ဆံပငျဆိုတဲ့ အမြိုးက ရှညျတိုငျးမကောငျးသလို ညှပျသငျ့တဲ့အခြိနျဆိုတာလညျး ရှိပါတယျ။ ကိုယျ့ဆံပငျ ညှပျသငျ့မသငျ့ကို ဘယျလို ဆုံးဖွတျရမလဲဆိုတော့…
မှနျထဲကွညျ့တဲ့အခြိနျ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျလှတယျလို့ မမွငျတော့ရငျ။
ဒါကတော့ ရှငျးပါတယျနျော။ လူဆိုတဲ့ အမြိုးက ကိုယျသိပျကွညျ့မကောငျးနရေငျတောငျ တခွားလှတဲ့နရောလေးတှကေို ဖွညျ့ကွညျ့ရငျး ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ အလှပဂေးဆိုပွီး ဂုဏျဆာနတေတျတာမလား။ (မလှဘူးမွငျရငျလညျး ခဏပါပဲ။) ဒါပမေဲ့ နောကျပိုငျးမှာ မှနျကွညျ့တိုငျး ‘ငါ့ဆံပငျကွီးက ဘုတျသိုကျနဲ့ အဆငျမပွလေိုကျတာ’ ဆိုတဲ့ စိတျမြိုး ခဏခဏဖွဈလာပွီဆိုရငျတော့ ဆံပငျညှပျခြိနျတနျပါပွီ။
ကိုယျ့ဆံပငျလေးက ရှညျတော့ရှညျပါရဲ့ အနားတှကေဖှာပွီး ပွောငျးဖူးမှေးဖွဈ၊ ဆံပငျဖွီးရငျလညျး ဂပျြခဲကွီး ဖွဈဖွဈနတေော့ ဘယျလိုမှ အရှညျဆကျထားဖို့ မဖွဈနိုငျတော့ဘူးလေ။ အဲ့တော့ ခုလောလောဆယျအရှညျထားလညျး ကွညျ့ရတာမတငျ့တယျမယျ့အတူတူ ညှပျလိုကျပွီး ဆံပငျကောငျးကောငျးလေး ပွနျမှေးတာကမှ အမြားကွီးပိုအဆငျပွသှေားမှာမို့ ဒီလိုပကျြစီးနတေယျဆိုရငျလညျး ညှပျလိုကျပါ။
ဥပမာ အသညျးကှဲတဲ့ အခွအေနမြေိုး၊ စာမေးပှဲကသြှားတဲ့ အခွအေနမြေိုးပေါ့ ယောငျးရယျ။ ကိုယျက အရာရာကို အရှုံးပေးခငျြနပွေီး စိတျဓာတျလုံးလုံးကနြတေဲ့ ဒီလို အခွအေနမြေိုးမှာဆိုရငျ အသဈအဆနျး တဈခုခုဘကျကို ကိုယျ့အာရုံ လှဲပဈလိုကျတာ အကောငျးဆုံးပါပဲ။ အနီးစပျဆုံးကတော့ ဒီဆံပငျပေါ့။ ကာလာတှဆေိုးပွီး ကိုယျအရငျတုနျးကလုံးဝမညှပျခဲ့ဖူးတဲ့ ပုံစံမြိုးသာ ညှပျခလြိုကျယောငျးရာ။ လှငျ့ခကျြတဈပေါကျ လြှမျးလြှမျးတောကျပွီး စိတျလညျးပေါ့ပါးသှားစရေမယျ။
ဆံပငျကိုလေ ညှပျခငျြနရေငျ ညှပျသာခလြိုကျ။ တခွား ဘာမှထှထှေထေူးထူး တှေးတောမနနေဲ့။ ရညျးစားက ခှငျ့မပွုလို့၊ အဖအေမေ ဆူမှာဆိုးလို့ စသညျဖွငျ့ အကွောငျးကွောငျးကွောငျ့ ကိုယျ့ဆန်ဒကိုထိနျးခြုပျထားရတာမြိုး မလုပျနဲ့။ လောကမှာ တခွားလူကွောငျ့ ကိုယျ့စိတျကိုယျ ခြုပျတညျးနရေတာလောကျ စိတျပကျြစရာကောငျးတာ မရှိဘူး။ ကိုယျညှပျခငျြစိတျပျေါလာရငျ ညှပျခလြိုကျ၊ အရှညျထားခငျြရငျ ဆကျထားလိုကျ။ ကိုယျ့စိတျကွိုကျ၊ ကိုယျ့ပုံစံအတိုငျး နပေါ။ စိတျထဲအမြားကွီး ပေါ့ပါးသှားပါလိမျ့မယျ။
ဆံပငျဆိုတာ ကိုယျမသမေခငျြး ပွနျပွနျရှညျတတျတဲ့ အမြိုးအစားပါနျော :3 ။ အကယျ၍ ကိုယျကရုတျတရကျကွီး ညှပျခလြိုကျလို့ ကိုယျ့မကျြနှာအနအေထား၊ ပုံစံနဲ့ မလိုကျရငျဘယျလိုလုပျမလဲ ဆိုရငျတော့ ကိုယျ့မကျြနျှာနဲ့ လိုကျမယျ့ပုံစံကို သခြောအရငျရှေးသှား၊ ပညာရှငျတှနေဲ့တိုငျပငျပွီးမှ ကိုယျလိုခငျြတဲ့ပုံစံကို သခြောပုံသှငျးညှပျပါ။ ဖွဈနိုငျရငျ နှငျးကတော့ ငယျတုနျးရှယျတုနျးလေး အသဈအဆနျးမှနျသမြှကိုလိုကျ စမျးကွညျ့စခေငျြတယျ။ အကယျ၍ ယုတျစှအဆုံး ကိုယျနဲ့ သိပျမလိုကျခဲ့ရငျလညျး စိတျကနြေပျမှုရစပေါလိမျ့မယျလို့။
Tagged decision, hair, haircut, Long, or, short
Posted on May 9, 2019 May 9, 2019 Author Hnin Ei Oo
Posted on February 19, 2019 February 19, 2019 Author Hnin Ei Oo
ပေါ့စေချင်လို့ကြောင်ရုပ်ထိုး ဆေးအတွက်လေး ဆိုတဲ့အကွက်တွေ 🤨🤨🤨
နတ်သမီးလေးလို့ တင်စားခံရတဲ့ မတ်မတ် Liu Yifei အကြောင်း တစ်စေ့တစောင်း